WOWOW उत्तम पुल डाउन किचन फाल चुम्बक क्रोमको साथ
घर / भान्साको नल / भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् / WOWOW उत्तम पुल डाउन किचन फाल चुम्बक क्रोमको साथ
2311901C स्थापना निर्देशन
किचन नल एकल ह्याण्डल 2311901C
के तपाईं आफ्नो एकल ह्यान्डल भान्छा नलको सीमित पहुँचबाट थकित हुनुहुन्छ? नहिचकिचाउनुहोस्, र तुरून्त WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डल खरीद गर्नुहोस्। वाहको भान्साको नल एकल ह्याण्डलको साथ तपाईं सजिलै आफ्नो दायरा विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं आफ्नो भान्छा सिink्क वा वरपर कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ। विशेष गरी जब तपाइँको भान्छा एक डबल किचन सिinkकले सुसज्जित छ, WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डल धेरै काममा आउँदछ। Degrees 360० डिग्री लचिलो स्प्रे हेडको साथ, तपाईंसँग अन्तिम लचकता छ जुन तपाईं चाहनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै स्पॉट छोडिनेछैन कि तपाईं WOWOW को भान्साको नल एकल ह्याण्डलको साथ पुग्न सक्नुहुन्न।
यसको चुम्बकीय डकि Withको साथ, तपाईं सजिलैसँग शक्तिशाली चुम्बकमा किचन स्प्रेयर तान्न सक्नुहुनेछ। यस तरीकाले तपाईको भान्साको स्प्रेयर सँधै स्थानमा हुन्छ र कुनै पनि अन्य भान्छाको नल जस्तै समयको साथ डुब्दैन। WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डलले तपाईंलाई कहिले निराश गर्दैन। यो नवीन कार्यक्षमता तपाईंको स्प्रे टाउको खस्ने वा चारैतिर उफ्रिनेबाट बचाउनेछ। WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डलको चुम्बकीय सुविधा १०,००० पटक परीक्षण गरिएको छ। अंतर्निर्मित चुम्बकले यी सबै परीक्षणहरूको प्रतिरोध गर्न सक्षम थियो, र अझै १०,००० पटक पछि यो स्प्रे टाउको राम्रोसँग ठीक गर्न सक्षम भयो र यसलाई बाहिर तानिसके पछि। तपाईं बलियो गुणवत्ताको बारे सुनिश्चित हुनुहुन्छ जुन घर र व्यावसायिक दुबै स्थानमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
विभिन्न प्रकार्यको साथ किचन नल एकल ह्याण्डल
WOWOW को भान्साको नल एकल ह्याण्डलले तपाईंलाई विभिन्न प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ। तीन पानी प्रकार्यहरूसँग तपाईं निर्दिष्ट पानी प्रकार्य चयन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई भान्साको काममा उत्तम प्रदर्शन गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग किचनको नल एकल ह्यान्डलको स्प्रे हेडमा बटनको साथ तपाईंलाई आवश्यक फंक्शन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले या त नियमित स्ट्रीम मोडको लागि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको भाँडाहरू पानीले भर्नु, वा स्प्रे मोडले तरकारीहरू धुनु। अनौंठो एक्वा ब्लेड मोडले तपाईको फोहोर भाँडा माझ्न र भान्छाको सिink्कलाई चाँडो र प्रभावकारी ढ r्गले पखाल्न बलियो बल प्रदान गर्दछ।
तपाईंको पानी बिल मा अर्थव्यवस्था गर्न, एकीकृत Neoperl एबीएस areator लगभग %०% पानी बचाउँछ। तपाईंले यस नवीन सुविधाहरूको कारण सायद कम पानीको मात्रा याद गर्नुहुनेछ। तर कम्तिमा तपाईलाई आश्वस्त गर्न सकिन्छ कि तपाईले कुनै पानी बर्बाद गर्नुहुन्न। यो किचेनको नल भाग सफा गर्न, वा कि त यो बदल्नको लागि एरेरेटर सजिलै एउटा सिक्का द्वारा हटाउन सकिन्छ। किचनको नल एकल ह्याण्डल पनि Neoperl एबीएस एरेटर बिना राम्रोसँग कार्य गर्दछ, त्यसैले यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं यसलाई आफ्नो भान्साको नल एकल ह्यान्डलबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
शीर्ष-गुणवत्ता रसोईको नल एकल ह्याण्डल
तपाईं आफ्नो पैसा को लागी प्राप्त गुणवत्ता प्रभावशाली छ। धेरै ग्राहकहरूले यो किचनको नल एकल ह्याण्डलको मूल्यसँग सम्बन्धित गुणको अपेक्षा गरेनन्। त्यसकारण हामी गर्व नगरी भन्न सक्छौं कि हाम्रो भान्छाको नल एकल ह्यान्डलले तपाईंलाई बजारमा प्राप्त गर्न सक्ने पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रदान गर्दछ। तपाईंले तुरुन्तै यो भान्साको नल एकल ह्याण्डलको गुणवत्ता याद गर्नुहुन्छ जब तपाईं यसलाई समात्नुहुन्छ। भान्साको नलको भारीपनले यसको बनेको ठोस धातु प्रकट गर्दछ।
भान्साको नल शरीर जस्त मिश्रबाट बनेको छ लामो समयसम्म धैर्यता सुनिश्चित गर्नका साथै किचन सिंक कोर पित्तलद्वारा बनेको हुन्छ। यसबाहेक, भान्साको नल टाउको स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ जुन तपाईंलाई ड्रइप-रहित र सिसा-रहित किचन उपकरण प्रदान गर्दछ। पुल आउट नली कडा विस्फोट सामग्रीबाट बनेको छ, र विश्वव्यापी बीमा कभरेजसहित टुकाई पानी आपूर्ति लाइन - एक स्टेनलेस स्टील जाल सतह सुविधा। कुनै चीजको लागि होइन WOWOW मा धेरै विश्वव्यापी ग्राहकहरू छन् जुन उनीहरूका वफादार ग्राहकहरू सदाका लागि रहन्छन्, किनकि उनीहरू अर्को किचनको पुनःनिर्माणसँगै WOWOW को किन्च faucets खरीद गर्दै फर्किनेछ।
सजिलो स्थापना भान्छाको नल एकल ह्यान्डल
जब तपाईं नयाँ डिजाइन गरिएको भान्छाको साथ संयोजन गर्न कुनै भान्छाको नल एकल ह्यान्डल चयन गर्नुहुन्छ, प्राय: जसो यो एक मिनेटमा तपाईंको किचन स्थापनाकर्ताले कुनै अतिरिक्त लागत बिना स्थापना गर्न सक्दछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं यस भान्छाको नल एकल ह्याण्डलको साथ आफ्नो भान्साकोठामा अपग्रेड गर्न चाहानुहुन्छ भने, केहि व्यक्तिले आफैंलाई रोक्न दिए जुन उनीहरूले सोचे कि महँगो प्लम्बर यस किचनको नल एकल ह्याण्डल स्थापना गर्न बोलाउनु पर्छ। जहाँसम्म, WOWOW ले यसलाई सजिलो बनाएको छ कि यो किचनको नल एकल ह्यान्डल स्थापना गर्न ताकि तपाईं आफैं गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले महँगो प्लम्बर भाँडामा लिनु पर्दैन र केवल minutes० मिनेटमा तपाईं आफ्नो पुरानो भान्छाको नल बदल्न सक्नुहुनेछ यस नयाँ ब्रान्डको किचनको नल एकल ह्यान्डल WOWOW को साथ।
यस किचनको नल एकल ह्यान्डल स्थापनाको सहजताको कारण ग्राहकहरू छक्क पर्छन्। WOWOW ले स्थापना गर्न सजिलो बनाउनको लागि व्यवस्थित गरेको छ, कुनै पनि व्यक्तिले केवल 30० मिनेटमा यस भान्छाको नल एकल ह्याण्डल स्थापना गर्न सक्दछ। भान्साको नल एक तरीकाले बनाइएको थियो कि यो कुनै पनि अन्य भान्छा नल भन्दा धेरै फरक छ। यो भन्नुभए बिना जान्छ कि सबै स्थापना सामग्री यस रसोईको नल एकल ह्याण्डलमा समावेश छन्।
लागत प्रभावी रसोईको नल एकल ह्याण्डल
WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डल १- वा--होल स्थापनाको लागि वैकल्पिक नल एस्कुटचेनसँग सुसज्जित छ। यस तरीकाले तपाईको किचेन काउन्टरमा स्थापना पछि कुनै पनि कुरूप प्वालहरू छोड्ने छैन। सबै कुरा एकीकृत रूपमा तपाईलाई योग्य इष्टतम इस्टेटिक्स दिन स्थापना हुनेछ। स्वयं किचनको नल एकल ह्याण्डल स्थापना गर्न, एक स्थापना किट तपाईंको उत्पादन संगै सम्मिलित छ, र स्थापना भिडियोको साथ, स्थापना आँखा झिम्केमा गरिनेछ।
WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डलले तपाइँलाई लागत प्रभावी गुणस्तर र आधुनिक उपस्थिति प्रदान गर्दछ, तपाइँले खोजिरहनु भएको भान्छाको नल एकल ह्याण्डल भेट्टाउनुभयो। यस भान्छाको नल एकल ह्यान्डल पक्कै पनि पैसाको लागि उत्तम मूल्य हो जुन तपाईं बजारमा पाउनुहुनेछ। -बर्षे वारंटी अवधि र-०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ तपाईं कुनै जोखिम बिना WOWOW को भान्साको नल एकल ह्यान्डल किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ?
संक्षेपमा भान्साको नल एकल ह्याण्डलका फाइदाहरू:
Spray चुम्बकीय तान्न स्प्रे टाउको
· Degrees·० डिग्री पुग्न
High उच्च गुणस्तरको ठोस धातुहरूले बनेको छ
SKU: 2311901 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् टैग: भान्सा सिink्क नल, स्पट स्टेनलेसको प्रतिरोध गर्नुहोस्, स्टेनलेस स्टील
21.7 x 11.2 x 2.8 इन्च